Bungalows Ere na mgbazinye n'ime Me14 5et, Maidstone, Kent
Bungalows n'ime Maidstone
Bungalows n'ime Kent
Ebiputara site na Ben Siggins
nlele Bungalows Bipụtara 2 weeks ago
Kent bụ mpaghara na South East England yana otu n'ime mpaghara ụlọ. Ọ dị Greater London n'akụkụ ugwu-ọdịda anyanwụ, Surrey na ọdịda anyanwụ yana East Sussex na ndịda-ọdịda anyanwụ. Mpaghara a na Essex nwekwara oke ala n'akụkụ Osimiri Thames (nke ala jikọtara site na Oke Speed ​​1 na Dartford Crossing) yana Ngalaba France Pas-de-Calais site na Ọwa Mmiri. Obodo isi obodo ahụ bụ Maidstone. Kent so na mpaghara Britain ndị Britain meriri ma biri na Anglo-Saxons. Katidral Canterbury dị na Kent abụrụla oche nke Achịbishọp nke Canterbury, onye isi nke Englandka England, kemgbe mgbanwe ahụ. Tupu mgbe ahụ ndị Katọlik wuru ya, malitere na ntughari England gaa na Katọlik nke Saint Augustine bidoro na narị afọ nke isii. Tupu Ndozigharị Bekee Katidral bụ akụkụ nke obodo moneni nke Benedictine mara dị ka Kristi Church, Canterbury, yana ịbụ oche oche Archbishop Katọlik nke Canterbury. Archbishọp Katọlik ikpeazụ nke Canterbury bụ Reginald Pole. Katidral Rochester nwekwara na Kent, na Medway. Ọ bụ katidral nke abụọ kacha ochie na England, ebe Canterbury Katidral bụ onye kacha ochie. N’agbata London na ure nke Dover, nke kewapụrụ ya na Europe Europe, Kent ahụwo njikọta mmekọrịta na esemokwu, sitere na mkparịta ụka udo nke Leeds Castle nke 1978 na 2004 rue Agha Britain na Agha IIwa nke Abụọ. England tụkwasịrị obi na ọdụ ụgbọ mmiri mpaghara iji nye ụgbọ mmiri dị ka ọtụtụ n'ime akụkọ ya; Ọdụ ụgbọ mmiri ndị Cinque na narị afọ nke 12 ruo nke 14 na Chatham Dockyard na narị afọ nke 16 ruo nke 20 dịcha mkpa. Enwere ike ịhụ France nke ọma na ihu igwe dị mma site na Folkestone na White Cliffs nke Dover. Illszọ dị n'ụdị North Downs na Greensand Ridge dị ogologo na steeti na usoro nke ndagwurugwu dị n'etiti na ndịda bụ ihe kachasị ukwuu nke ogige 26 nke steeti ahụ. N'ihi ụba ubi na-amị mkpụrụ ma na-enwe mara mma, a maara Kent dị ka 'Ubi nke England'.Kent akụ na ụba nwere ọtụtụ; haulage, lọjistik, na njem bụ ọrụ ukwu. Na northwest Kent ọrụ gụnyere mmịpụta nke ihe owuwu ụlọ, obibi akwụkwọ na nnyocha sayensị. Ngwuputa igwe-nsị esowokwa na akụkụ ihe nketa ụlọ ọrụ Kent. Akụkụ Kent dị ukwuu dị na eriri igwe London na njikọ njem ya na isi obodo yana kọntinenti dị nso na-eme ka Kent bụrụ nnukwu ego. Pasent iri abụọ na asatọ nke steeti ahụ so n'akụkụ abụọ nke Oke Mma Mma: North Downs na The High Weald.